မယ်ကြည်၏ သူဌေးဖြစ်ကျမ်း (၂) — Steemkr
မယ်ကြည်၏ သူဌေးဖြစ်ကျမ်း (၂)
အပိုင်း ၁ အား ဖတ်ရူ့ပါရန် link↗↗
မုန့်ဗန်းကြီးကြည့် ပီတိဖြာနေတုံး နောက်ကနေ...😱😱
"ဟေး..မမ ဘာတေ လုပ်နေတာလဲ ညီမလေးဖို့လားဟင်..😁”
"အေးပါအေ ညီမလေးလဲစား ဒီလောက် အများကြီး မမတို့ရောင်းရအောင်လေ....”
"ဟုတ်မမ ရောင်းမယ် လေ...ဟေး..ပျော်စရာကြီး..”
သူမက ဈေးရောင်းတာ သူ့တွက် ကစားစရာ ရသလိုပဲရယ်...မို့လား😁
မယ်ကြည် ဒီနေရာ သူမကို အားကိုးရတယ်။
"ညီမလေး ရေ မမတို့ သူဌေးဖြစ်အောင် မုန့်ပြားသလက် လုပ်ရောင်းတဲ့ အကြောင်းက ဒီလိုရှိတယ်..မမပြောပြမယ် လာဒီကို....”
အနားခေါ် တိုးတိုးလေး ပြောပြရတယ်....😌😌
"ဒီလို ညီမလေး မမက ခု ဒီမုန့်ပြားသလက်ကို msc ရွာတင် ရောင်းမယ်ထင်သလား..😊 no no😉ဒီလိုရှိတယ် ခုတော့ ရွာမှာ အရင်ရောင်းမယ်....🤣
တစ်ခုကို 1sbd ဒါမှမဟုတ် 1steemနဲ့ ရောင်းမယ် လေ😌 မုန့်ပြားသလက်က စားကောင်းတော့ လာဝယ်ကြမာ ညီမလေး..။ အာ့လိုနဲ့ မမ မုန့် စားကောင်းကြောင်း အနီးနားက ရွာတွေကပါ ကြားကြရောမလား..☺ sbd steem နဲ့တင်မက ဂီဂီ @honeysara လို ကြိုက်တဲ့ coinနဲ့လာဝယ် ရောင်းပစ်မယ်လေ။ အဲ့ airdrop coinတွေနဲ့တော့ လာမဝယ်နဲ့ sorry ပါပေါ့အေ..😊အာ့လိုနဲ့ တဆင့်စကား တဆင့်နားနဲ့ မမရဲ့ မုန့်ပြားသလက် ကို နိုင်ငံတကာ တင်ပို့မယ်လေ🛩🛩🛩..။ ညီမလေး သိတေမလား...
ချစ်ဆုံးလေး ပေကလက်😌😌 ပေကလက် နဲ့ နားထောင်နေသည်။
သူ လည်လည် မလည်လည် မယ်ကြည့်မှာ ရှေ့ဆက် ပြောရမဲ့ တာဝန် ရှိသည်မလား..။
"အဟမ်း.. မြန်မာပီဇာ မုန့် ပေါ့အေ🍝🍝..။ ညီမလေးရဲ့ နိုင်ငံတကာ တင်ပို့ရရင် မမတို့ ချမ်းသာပီလေ..။ အာ့လိုဆို မမတို့ သွားချင်သမျှ ညီမလေး လိုချင်သမျှ ဝယ်တော့အေ💄💍👡..။ မမ အကြံက အာ့လောက်နဲ့ ပြီးပြီထင်သလား🤔🤔 ...”
သူမ ပေကလက် ပေကလက်နဲ့ပဲ 😌🙄🙄
"မမမုန့်ကို နိုင်ငံတကာ သိအောင်ကကျ airdrop coinဖန်တီးမှ ဖြစ်မေ။ ဟိုတလောက LG coinလေ အာ့ဒါနဲ့ အတူတူ ထုတ်ရမယ်အေ့။ ခု coin ကိုလဲ နာမည်ပေးရမယ်။ မြန်မာမုန့်ဆိုတော့ကား MT coin (Myanmar Traditional) ကောင်းတယ် မလား ညီမလေး...😊”
"ဟုတ် မမ😁 ”
Twitterရယ် ၊ facebookရယ်၊ raddit ရယ်၊ social media တွေမှာ မမတို့ မြန်မာမုန့်ကို page တွေ ဖွင့်ရမေ။ ပြီး အကောင့်ဖွင့် သူတိုင်း airdrop 10000 ပေးမေဆိုပြီး လူတွေအကုန် likeခိုင်း subscribe လုပ်ခိုင်း telegram join ခိုင်း ပြီး eth wallet လေးထည့်ခိုင်းပြီး အကုန်လုပ်ခိုင်းမေလေနော့😁။
အာ့လိုဆို မမတို့မုန့် နိုင်ငံတကာသိပြီး လေယာဉ်တွေနဲ့ တင် ရောင်းယုံပဲ😊🤔။ နိုင်ငံအတွက် $ရဖို့ တစ်ဖက်တလမ်းက ကူညီရာလဲ ရောက်တာပေါ့နော့..။ ကဲ ဘယ့်နဲ့လဲ မမ အကြံမပိုင်လားအေ..”
"ပိုင်တယ် မမ ခေး ခု ရွာထဲ လည်ပြောရတော့မလား
အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ လဲ ရှိတယ်ဆိုပြီး..💃💃”
"ငါ့ညီမလေး ဒီလိုကျ တော်တာအေ..😁😁”
"ဒီလိုလုပ်ခေး ပိုစိတ်ဝင်စားကြအောင် မမတို့ မုန့် ဝယ်စားသူတိုင်း တစ်ခုဝယ် သကြားလုံး တစ်လုံး လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ရော ကြေညာလိုက် ပထမဆုံး အယောက် 100ပဲ ပေးမှာ လို့နော်😁။ ပီးတော့ ပြောလိုက်အုံးအေ ချိုချဉ်က ရိုးရိုး ချိုချဉ် မဟုတ်ဘူးလို့ အိန္ဒိယက တင်သွင်းတဲ့ ဆေးဖက်ဝင် ဇီးဖြူသီးချိုချဉ်လို့ပြောလိုက်နော်..🙄🙄”
@chitsone ညီမလေး ဘယ်လောက်ပြောချင်နေပြီမသိ..။ အမြီးပင်မမြင်ရ.. ရွာထဲ ပြေးချေပြီတကား..😁😁
မိတ်ဆွေတို့လဲ လာဝယ်စားကြပါအုံးနော်🙂 အရမ်းစားကောင်းတယ်ပြောရင်တော့ ချိုချဉ်နောက်တစ်လုံး ထက်ပေးမှာပါ။
ပြီးတော့ airdrop လေးလဲအကောင့် ဖွင့်ပေးကြပါအုံး မစားရ ဝခမန်း coin အများကြီး wallet မှာ မြင်ရစေဖို့ အာမခံပါတယ်။
ပြီးတော့ clone ပြီး refer ရှာပြီး coin ပိုရအောင်လဲ လုပ်ပေးအုံးမယ်။ ကဲ ဘာလိုသေးလဲဗျာ..။ ရေမီးအစုံနော်..။ အခုပဲအပြေး လာဝယ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ မယ်ကြည် မုန့်ဆိုင် ဖွင့်ထားပါပြီလို့😁...။ Airdrop ကတော့ ရရင်လဲရမယ် မရရင်လဲ မရဘူးပေါ့ နော့..🤗🤗 များများလေး လာအားပေးကြပါအုံးလို့😍😘
myanmar funny wriring thinking partiko
မကြောက်ပါနက် ကိုမိုးရယ် လုပ်နေကြပဲဂို😋
Hi @kyi, I'm @checky ! While checking the mentions made in this post I noticed that @honeysaya doesn't exist on Steem. Did you mean to write @honeysara ?
Yes sorry, I adjustment my post thank you😁
မမ. ဘာပြောတာ သူကိုမမ🙄🙄
မမကို စာလုံးပေါင်းမှားတယ် ပြောပြတာ😁
မုန့်ပျားသလပ် ၅ခု လာပို့ပါ
စစ်ကိုင်း ခရက ရုံးဝင်းထဲ နေပါတယ်
Ok လေ နေ့ခင်း လေယာဉ်နဲ့ ပို့ပေးလိုက်ပါ့မယ်🛩🛩
ငှင့်​ သူ​ဌေးဖြစ်​ကျမ်း ၁ က​မေ့​တောင်​​နေပီ အဟီးး
မေ့နေရင် ၁ ပြန်ဖတ်လေ😁
ဥဥ . ယု @yuzana. အာပေးပါအုးံ. ကွိင်ပတ်တာခနချဗျ ဟဟ😂😂😂
ခ်ခ် အလကားက airdrop ယူပါလေ😁
Yes ဦးမင်း😁😁 မုန့်လဲ အားပေးပါအုံး
@minsoenaing. ဆျာခင်ဗျ. ခေး တို့ကိုမုန့်ဝယ်ချားပါအုးံ .. . 😋😋
ကိုကိုတို့မမတိုဥဥတို့. . မုန့်ကချားကောင်းတေနော်.. အာပေးကြပါအုးံဗျ. 😋
ဟဲဟဲ မုန့် စားကောင်းတယ် ပြောရင်တော့ ချိုချဉ်ထက်ပေးပါ့မေ😁
မမ ခေး ဘဘတိုအိမ်ဘက်ခနသွားကြည်ချင်တေမမ. ဘဘရှိလားလို့😋
သူဌေးဖြစ်နည်းဆို စိတ်ဝင်စားတယ် မယ်ကြည်ရေ စုလည်း ပေးပါအုံး
အိမ်း🙄🤔မုန့်ပြားသလက် လုပ်ရောင်းမို့ စုရေ..😁
မမစု. အားပေးပါအုးံဗျ . ချိုချဉ် သကြား. လုးံလည်းယူပါ😋😋
ထိုထိုအကြံကို ဟိုလို‌နေရာမှာ ဘာ‌ကြောင့်‌မသုံး။
ဥဥမဟော်@mahaw.. ဘာကျောနေနာရဲဗျ.. ချကာများနေတာ. ခေးမုန့်တေ အားပေးပါအုးံဥဥရ. မုန့်တခု 1sbd or 1steem 😊😊😋😋
အော် သူများသားသမီးများ စီပွားရေးဈေးကွက်
ဟုတ် 😁😁အဟိ မုန့်လေး လာဝယ်စားပါအုံး😁
မုန့်ပြားသလက်က ပူပူနွေးနွေးမှ စားလို့ကောင်းသလို အရသာလည်းပိုရှိတယ် အေးသွားရင် အိုးထဲပြန်ထည့်ပြီး နွေးစားတာတောင် စားမကောင်းတော့ဘူး ဒီတော့ အွန်စောကို အဲ မှားလို့ အွန်လိုင်းက ရောင်းလို့မရဘူး ☺
အော် ဥဥစိုး @ansoe မင်္ဂလာပါခင်ဗျ.. . မုန့်တေ စက်ထဲထည့်တာအေးပုဗျ ပူပူနွေးနွေးလေး.. 😋😋😋
လုံးဝ နွေးနေစေရပါမယ် မှာလတ်ပါ ဥစိုး😁
အ​ကောင့်​မြန်​မြန်​ ဖွင့်​မှပါ​လေ 😁😁
Wallet မာ coin တေများရိး မြင်ရပါစေ့မယ်😁
airdrop coin ပဲရှိတယ်ဗျ။KYC လည်းအောင်ထားပြီးသားလေ--verification ဖြစ်ပြီးသားလေးပါ။အဲဒါဆိုရင် ဝယ်စားလို့ မရလောက်ဘူးလားဗျ။
အာ့ဆို market ပေါ်ရောက်မှ ဆက်ပြောကြတာပေါ့😁😁